Gabar Soomaaliyeed oo sakaal booliis ka noqotay Magaalada St. Paul | sowora
← Hope runs deep, rebuilding confidence among Syrian women refugees
HRW: Saudi Arabia deports thousands of Somalis despite UN warnings →
Gabar Soomaaliyeed oo sakaal booliis ka noqotay Magaalada St. Paul
Posted on March 2, 2014	by sowora
Khadro Maxamed ayaa ka shaqeynaysay qaybta arrimaha bulshada ee booliiska St. Paul dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Khadro waxay kasoo jeeddaa Soomaalida dalka Kenya ku nool, waxayna ka baxday dugsiga sare sannadkii 2010-kii.
Sidoo kale, Khadro waxaa lagu wadaa inay ka qalinjabiso bisha May ee sannadkan 2014-ka machadka barashada barista dambiyada iyo cadaaladda ee St. Paul, iyadoo howsheedu ay noqon doonto inay difaacdo Soomaalida ku nool gobolkaas.
“Rajadii aan muddo badan qabay ayaan maanta ii rumowday, waadna garan kartaan inaan dadaal badan u galay sidii ay riyadeydu ku rumoobi lahayd,” ayay Khadro ku sheegay hadal ay bixisay markii garaadaha sarkaalnimo loo xiray.
Iyadoo sii hadashay ayay Khadro Maxamed ka dalbatay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minneosta, gaar ahaan haweeka inay dadaal u galaan sidii ay darajoojin sar-sare uga gaari lahaayeen hay’adaha kala duwan ee gobolka.
Ma jirto magaalo kale oo ka tirsan gobolka Minnesota marka laga reebo St. Paul oo u ogolaatay inay ka mid noqoto saraakiishooda booliiska haweeney Soomaaliyeed, sida Khadro oo kale.
Dhanka kale, magaalada St. Paul ayaa noqonaysa magaaladii ugu horreysay oo si rasmi ah u ogolaata in haweenka ka shaqeeya gobolkaas ee muslimiinta ah ay xirtaan xijaabka lagu yaqaan haweenka muslimiinta ah.
Taliyaha booliiska St. Paul, Tom Smith ayaa sheegay inay rajeynayaan Khadro ay tusaale u noqoto haweenka kale ee Soomaaliyeed ee doonaya inay ka mid noqdaan booliiska magaaladaas.
Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ah gobolka ay ku nool Soomaalida ugu badan ee ku nool dalka Mareykanka, waxaan dhawaan xilalka sarsare ee gobolkaas loo doortay dhallinyaro Soomaaliyeed oo rag ah.